Ama-Apex Hacks 🥇 Aphambe, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
I-APEX IZIKHALALEKILE EZIKHONA
I-Apex Legends ngumdlalo omuhle owethula isitayela esisha segeyimu yabashisekeli bokudubula. Ukumataniswa ne-Apex Legends Hack yethu, akekho kule planethi ongakugcina uqukethe!
Usuvele uthenge i-Apex Hack? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Sicela wazi: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-Apex hacks ethu, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kubuyekezwa noma liseseku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu I-Apex Hacks
Ama-Apex Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, i-Wall Hacks nokuningi
Hack likaHack yilelo elaligqokwe
Intel likaHack yilelo elaligqokwe
Midnight likaHack yilelo elaligqokwe
Thenga I-Apex Hacks in 4 izinyathelo
Khetha umdlalo ofanele obheke kuma-hacks, sinokukhetha okukhulu ongakhetha kukho!
Kunama-hacks amaningi okufanele uwacabangele, ngakho-ke kuzodingeka ukhethe okulungile okuhambisana nezidingo zakho.
Khokha usebenzisa i-Exclusive Payment Processor yethu
Zonke izinkokhelo zethu zicutshungulwa ngokukhethekile nangokuvikelekile, nokugcina abasebenzisi bethu bephephile
Finyelela Ukhiye Wakho & Landa ama-Apex Legends Hacks!
Manje njengoba usuthenge ukhiye womkhiqizo, ungawusebenzisa ukulanda ama-Apex Legends Hacks ethu.
Kungani Usebenzisa i-Gamepron Apex Legends Hacks?
Ngu Cooper Hollmaier - Kubuyekezwe u-Agasti 10, 2021
I-Apex Legends Isizini 10 cishe sesifikile futhi abadlali bajabule ngokuthola izandla zabo kwiLegend entsha yomdlalo, iMboni. Umboni wenzelwe ukuthola ulwazi oluningi ngesitha ngangokunokwenzeka, njengoba igama lakhe lingasikisela. Ufakwe inzwa yokushaya kwenhliziyo, ama-drones, nendlela yokubona izinyathelo zesitha.
I-Apex Legends ivuselelwe kaningi emjikelezweni wayo wokuphila kangangokuba amanye amamephu ahlelwe kabusha amahlandla amaningi, kanti iWorlds Edge ingenye yawo. Imephu ifanele ukuvuselelwa kwesithathu ngokuvuselelwa okulandelayo kuma-Apex Legends, futhi zonke izimpawu zikhomba ukuthi icekelwe phansi noma ilimale ngenye indlela emcimbini ozayo.
I-Apex Legends ibinomlingiswa ophukile kusukela ngoMeyi, uthango lukaWattson lungakwenzi obekufanele bakwenze. Ngokuvuselela i-1.69, ama-Wattson mains angajabula ukuzwa ukuthi uthango lwawo manje seluzokwazi ukwehlisa abadlali ngempumelelo kakhulu, okwenza iWattsone ibe ngumsekeli oyingozi wokulawulwa kwesixuku.
I-Apex Legends ngumdlalo omusha we-Battle Royale okuvumela ukuthi uhlanganyele nabanye abangane abaningana ubakhiphele empini. Uzofunda ngokushesha okukhulu ukuthi ezinye izinhlamvu zinamandla kakhulu kunezinye, futhi lokhu kusho ukuthi uzothambekela ekuzisebenziseni kakhulu - abadlali bathe abanye abalingiswa babonakala “benamandla”, ngakho-ke kwesinye isikhathi kuzozwakala Joyina ukukopela noma ufe nje ngokuzama njalo. Abakhohlisi bazofika ezinhlobonhlobo eziningi ezahlukahlukene, ngisho nenombolo yezici ezitholakala ngaphakathi kwe-Apex Legends Hack yethu inganele ukukuncenga ukuthi ujoyine i-Dark Side! Awukaze ube nalolu sizo olukhulu ngenkathi udlala umdlalo wevidiyo, okungako ongathembela kukho.
Asinikezi nje amakhasimende ethu ithuluzi elingenalutho ozolibona kuyo yonke i-inthanethi, sinikeza ama-Apex Legends Hacks akhethekile azokuguqula ube ngumshini wokuwina ongapheli. Wonke umdlalo owodwa uzophela nawe phezulu ngoba i-Apex Legends hack yethu yayenzelwe ukulawula umphumela womdlalo wonke. Ngokuthandwa kwe-Apex Legends Aimbot, i-ESP, i-NoRecoil, nezinye izici eziningi, akunakushiwo ukuthi uzoba nempumelelo engakanani ngenkathi usebenzisa ama-cheats ethu.
Uma uke wadlala i-Apex Legends esikhathini esedlule futhi waba nokuhlangenwe nakho okungaphansi kwe-stellar, cishe kunesizathu esihle salokho. Abadlali abaningi bakwazile ukucija amakhono abo ngonyaka odlule noma kunjalo, futhi ngenxa yalokho, kunabadlali abaningi abasezingeni eliphezulu kulo mdlalo. Uma uyicosha okokuqala lokhu kungadumaza ngokumangazayo, njengoba abanye abadlali bengazihluphi ngokunikeza umdlalo ithuba lesibili ngemuva kokuqeda ukunqoba kwabo kokuqala. Akukho ukuminyaniswa kumbuthano wokugcina lapho i-Apex Legends Hack yethu yenziwe yasebenza ngoba amathuluzi ethu awanangqondo ngokuphelele.
Sizamile ukwenza lula inqubo yokufaka ukuze siqinisekise ukuthi nabasebenzisi be-novice bangangena ku-Apex Legends Hack yethu, futhi sizizwa sengathi siphumelele kuleyo ndaba. Akudingeki ukhathazeke ngokuthi ikhompyutha yakho izodliwa ngamagciwane afihliwe noma ngisho nokuthi i-akhawunti yakho ivinjelwe ngoba i-Gamepron inikeza kuphela ama-100% angabanjwa futhi aphephile kubo bonke abasebenzisi bethu. Noma yini ozizwa sengathi iyadingeka ukuwina ukufana okuningi kuma-Apex Legends, yazi nje ukuthi i-Apex Legends Hack yethu izofaka konke okudingayo.
I-Apex Wall Hack (ESP)
Imininingwane ye-Apex Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
I-Apex Item ESP enezihlungi
Izexwayiso zesitha se-Apex
Imodi ye-Apex super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza).
I-Apex bone & ukhiye wokuhlose okulungisekayo.
Isinxephezelo se-Apex Recoil
Impela I-Apex Hack Izici
Sebenzisa i-Apex Legends Player ESP yethu ukulandela umkhondo wezindawo zesitha, futhi ubize izinsongo ezingaba khona kubalingani beqembu lakho!
Ukukhomba abadlali kuwumoya uma usebenzisa i-Apex Legends ESP yethu, njengoba sikunikeza ukuthandwa kwamagama, imigoqo yezempilo, ngisho nebanga labo.
Thola impango enhle kakhulu ngaphandle komzabalazo! Ukusebenzisa i-Item ESP yethu ngezihlungi kukuvumela ukuthi ubone izibhamu ezinhle kakhulu kuzo zonke izakhiwo.
Ungathola kuphela i-Apex Legends Aimbot yethu lapha eGamepron, futhi kuyisinqumo esisobala salabo abafuna ukuthuthuka ngokunemba kwabo.
I-Apex Bullet track (isebenza ngamabanga amafushane naphakathi)
Landelela izinhlamvu zakho njenganoma yimuphi umzingeli oyinhloko ngokusebenzisa isici sethu se-Apex Legends Bullet Track. Iphelele kuwo womabili amabanga aphakathi nendawo amafushane!
Izitha ngeke ziphinde zikuwise, njengoba sinikeza ukuvikelwa ngendlela yezexwayiso zesitha (noma nini lapho zisondele noma ziqondiswe kuwe).
Imodi ye-Apex super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza)
Ukuwa kusuka ezindaweni eziphakeme ezingabulala kungumoya lapho i-Apex Legends Hack yethu yenziwe yasebenza, njengoba iSuper Jump Mode izokugcina uchuma.
I-Apex bone & ukhiye wokuhlose okulungisekayo
Sinezici eziningi eziwusizo ezifakiwe ngaphakathi kwe-Apex Legends Hack yethu, kufaka phakathi i-Bone Prioritization nezinye izilungiselelo eziningi ezilungisekayo.
Ukuhlolwa okubonakalayo kwe-Apex aimbot
I-Apex Legends Aimbot yethu ifaka phakathi nokuhlolwa okubukwayo, okuzokusiza uqinisekise ukubulala nokubona ukuthi izitha zicashe kuphi.
Ukubuyisa kungakubulala ngesikhathi kuqhuma isibhamu, ngoba kungaba nomthelela omubi ekunembeni kwakho. Isuse ngokuphelele ngesinxephezelo sethu se-Apex Legends Recoil!
Yiba Umdlali Ohamba Phambili Wezinganekwane ku-Planet
Ngabe uzama ukuba ngumdlali we-Apex Legends osatshwa kakhulu umhlaba wethu owake wakubona? Ngenkathi kukhona abantu abanekhanda lokuqala, ukusebenzisa i-Apex Legends Hack yethu kuyindlela elula yokubheka le nqubo. Ngeke nje ube nempumelelo engaphezulu futhi uwine cishe yonke imidlalo, kodwa uzozijabulisa ngenkathi uyenza! Sonke sifuna ukuba ngabanqobi empilweni, futhi amathuluzi atholakalayo kwaGamepron akusiza ukufeze lokho kanye.
Ama-Apex Legends Hacks adumile nama-Cheats
Izinganekwane ze-Apex Aimbot
I-Apex Legends ESP neWall Hack
Amanye ama-Apex Legends Hacks futhi aphambe
Ama-Apex Legends Hacks ethu athandwa ngesizathu esihle kakhulu, futhi kungenxa yokuthi abanye abahlinzeki be-hack basizonda thina. Asizami ukukhipha amathuluzi ngokushesha okukhulu ngoba lokho kuzolimaza ikhwalithi okufanele sinikele ngayo. Uma ugxile ekwenziweni kwamakhulu amathuluzi ahlukene futhi uzama ukudala ama-hacks kuwo wonke umdlalo owodwa laphaya, ikhwalithi izoshuba. I-Apex Legends Hack yethu yinto ebesikade siyakha okungenani unyaka, asizange sigijimele lutho futhi sesike sakhipha amathuluzi anekhwalithi engqondweni.
Kungakho siqhubeka nokuba ngumhlinzeki odume kakhulu we-Apex Legends Hacks online ngoba siyazi ukuthi yini umdlali oyifunayo. Siyaqonda ukuthi kungakhungathekisa kanjani ukulahlekelwa ekugcineni komdlalo we-Apex Legends, ngakho-ke sinqume ukwenza i-Apex Legends Hack ezosiza abasebenzisi bethu ukuthi bagweme leyo nhlekelele.
I-aimbot cishe njalo izocacisa umphumela womdlalo wakho, noma ngabe unazo zonke izici ezinikwe amandla noma cha. I-Apex Legends Aimbot yethu ifakwe ezinye zezici eziwusizo kakhulu ezungeze, njenge-Auto-Aim / Fire kanye nokubushelelezi okuhlose ukugcina izibukeli zisemhlane wakho. Awufuni ukuthatha noma imaphi amathuba emdlalweni olwa namanye amaqembu amaningi, nokuthi iqiniso lokuthi umdlalo ngamunye ungaba mude kumane nje ungeze ukubaluleka kokuwina.
Uzoshaya amakhanda abantu ususe kude lapho kungenziwa khona i-Apex Legends Aimbot, futhi awudingi nokuba nesibhamu se-sniper ukwenza lokho. Besihlala sicabanga ukuthi abadlali babe nokuguquguquka okuningi kuma-Apex Legends, kepha ukusebenzisa i-Apex Legends yethu i-Aimbot kuzoletha ukuguquguquka kwakho kube sezingeni elisha ngokuphelele. Yithathe kochwepheshe, siyazi ukuthi yini okusebenzayo - futhi le Apex Legends Aimbot iyasebenza!
I-Apex Legends Wall Hack ne-ESP yethu ifana nengane, ngomqondo wokuthi besikhula futhi sikhulisa iWall Hack yethu isikhathi esithile. Yize yonke i-ESP eyodwa ne-Wall Hack ohlangana nayo izokwenza into efanayo, ukuhumusha kwethu kuhluke kakhulu - sikuvumela ukuthi ubone zonke izinhlobo zezinketho ze-ESP ezahlukahlukene, eziningi zazo ezizokusiza ukuthi ubone ukuthi usongo lwakho lukhulu kangakanani Umphikisi. Noma ngabe ufuna ukubona ukuthi isiphi isibhamu umuntu asisebenzisayo noma ukuthi usele nempilo engakanani, ungasebenzisa i-Ape Legends ESP neWall Hack ukuthola imininingwane ebalulekile ngezindawo eziqinile nezingabonakali kahle.
Akumele senze amaphutha kulo msebenzi, ngoba ukushelela okukodwa kungasho ukuvinjelwa okungenzeka kubasebenzisi bethu. Onke ama-hacks ethu awatholakali ngokuphelele futhi ngeke akubeke engcupheni, ngakho-ke ngokusobala noma i-Apex Legends ESP neWall Hack ziyefana.
Izitha zakho zizoba nobuqili kwesinye isikhathi, zisuke kuwe nge-wraith ngokuzihlikihla bese ulahlekelwe ukufa ngamasentimitha ambalwa. Sisebenzisa i-Apex Legends Hacks ukuzizwa siphakeme ngenkathi sidlala, kepha kwenzekani lapho othile eshelelela ngokwanele ukuba asuke kuwe? Ungasebenzisa isici se-Footprint ukuthola ukuthi isitha siya kuphi ngokulandelayo, njengoba imikhondo yezinyawo izolandela ngemuva kwabo futhi ikuholele endaweni yabo. Lokhu kuwusizo kakhulu uma ubamba isitha, noma udinga ukuthola ukuthi abantu bokugcina bacashe kuphi kumbuthano wokugcina. Yiba yi-master tracker futhi uthole abaphikisi bakho kalula, kungakhathalekile ukuthi bakuphi.
Izici Zokulimaza Okuphakeme neBanga zombili ziwusizo olukhulu ngokwazo. Isici Sokulimala Okuphezulu sizokuvumela ukuthi upakishe isibhakela esisindayo kunabo bonke abaphikisi bakho, futhi isici seBanga sizokuvumela ukuthi ubone ukuthi zikude kangakanani izitha zakho (nezinsongo ezingaba khona).
I-Gamepron izohlala ingunjiniyela we-hack ohambisana nezimo kakhulu, okuningi esiqiniseke ngakho. Ngenkathi abanye abathuthukisi bematasa nokusonta izithupha zabo noma ukwenza nje ama-hacks asezingeni eliphansi, sizama ukuthuthuka kumathuluzi asevele ekhishiwe futhi siphelelise lawo esingakadedeli okwamanje. I-Apex Legends Hack yethu iza ifakwe ukuthandwa kwesici sokususa, kanye nezinye izinto eziningi eziwusizo ongazijwayele ukuzibona ekukopeleni kwendabuko. Siguqula indlela obhekana ngayo nokugenca kuma-Apex Legends ukuze abe ngcono, futhi kuyacaca ukuthi abadlali bamageyimu emhlabeni wonke bayakuthanda lokho esizama ukukufeza.
Ngaphandle kokucabanga ukuthi uyakudinga maqondana ne-Apex
Izinganekwane ze-Hacks, i-Gamepron izokusebenzela ngokusemandleni ethu. Awudingi ukuqagela okwesibili ukuthenga i-Apex Legend hacks, ngoba ekugcineni ivela emthonjeni onokwethenjelwa! Abalandeli be-Apex Legends bayajabula, njengoba ekugcineni kukhona umhlinzeki ochwepheshe we-Apex Legends Hacks nokukhohlisa.
Ama-Apex Hacks Imibuzo
Kungani ama-Apex Legends Hacks ethu
Ngabe ukhetha ukusebenzisa i-hack yamahhala, noma ukhokhele okuthile ongeke ukuthole kwenye indawo? Okwenza i-Apex Legends Hack yethu yehluke ikhwalithi engenele inqubo yokuthuthuka, nokuyinto abanye onjiniyela be-hack abangayinaki. Uma ufuna isipiliyoni esihle kakhulu, akekho umhlinzeki ongcono kuneGamepron.
Kungani i-Apex Legends Aimbot yethu
Awufuni ukuphuthelwa isibhamu ngenkathi udlala i-Apex Legends, ngoba lokho kuzokuvulela ithuba lokuhlaselwa ngabaphikisi bakho. Sebenzisa i-Apex Legends Aimbot yethu futhi uqiniseke ukuthi wonke amashothi akho ashiya umgqomo ngezinhloso ezibulalayo! Ngisho nomdlali onekhono kakhulu angadutshulwa nge-Apex Legends Aimbot yethu yenziwe yasebenza.
Kungani i-Apex Legends ESP yethu
I-Apex Legends ESP elungile izokunikeza inzuzo enkulu, njengoba ukubona ngezindawo eziqinile nezikhanyayo kuvula amathuba amaningi. Ungathola lapho amakamu alalisa khona abantu ukulala futhi ubaphathe ngendlela efanele, noma ungasebenzisa umsebenzi we-ESP ukukhomba impango enhle kakhulu ngaphambi kokungena esakhiweni. Kungani uchitha isikhathi sakho lapho unganciphisa amanoni nge-Apex Legends ESP yethu neWall Hack?
Kungani i-Apex Legends Wallhack yethu
Kubhangqwe eceleni kwe-ESP, i-Apex Legends Wall Hack yethu izokuvumela ukuthi ubize izindawo zesitha kalula. Akudingeki ukuthi uzibone, njengoba ukwazi ukubuka izindonga eziqinile nezicijile ukuthola indawo yomphikisi - lapho-ke ungazibulala noma wazise ozakwabo ngeqembu ngengozi.
Kungani i-Apex Legends Norecoil yethu
Ukuthola kabusha kuyinkinga kwabanye, noma ngabe sonke kufanele sizame ukukususa noma nini lapho sikwazi. Kungakho umsebenzi weNoRecoil usuyinketho ethandwayo kubo bonke abasebenzisi bethu, njengoba ukunemba kwakho okuthonywe kabi yi- "recoil" kuyacasula. Susa nge-Apex Legends cheat yethu!
Ungawalanda kanjani ama-hacks amahle kakhulu we-Apex Legends?
Uma ubufuna ukulanda ama-Apex Legends Hacks amahle kakhulu atholakala online, iWinThat War iyindawo engcono kakhulu ongaba kuyo. Siyinsizakalo ekhethekile futhi awukwazi ukuthola lezi zici (ezinikezwa ngaleli zinga eliphakeme) kwenye indawo! Joyina iklabhu ekhethekile ngokuthenga ukhiye womkhiqizo namuhla.
Kungani ama-Apex Legends wakho ebiza kakhulu kunamanye
Sifanele sikhokhise imali ethe xaxa uma uqhathanisa intengo ye-Apex Legends Hack yethu kwabanye, ikakhulukazi ngoba siyisevisi ekhethekile futhi sinenani elilinganiselwe lama-slots onganikela ngalo. Njenganoma yini enye empilweni, ukukhetheka kuzodinga amanani aphezulu - izindaba ezimnandi ukuthi sisengabizi.
Sigcina izinto ziguquka ngokunikeza okhiye bemikhiqizo yamakhasimende ethu abasebenza nsuku zonke, masonto onke, nangenyanga zonke. Akunandaba ukuthi ucabanga ukuthi uzokopela kangakanani, sizoba nenketho ephelele yokhiye womkhiqizo wakho.
Awesome I-Apex Hack Izici